ငလျင်ကြောင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ လန်ဘော့စ်ကျွန်း၌ ပိတ်မိနေသော ရာပေါင်း များစွာသော ခရီးသွ - Yangon Media Group
ငလျင်ကြောင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ လန်ဘော့စ်ကျွန်း၌ ပိတ်မိနေသော ရာပေါင်း များစွာသော ခရီးသွ
ဂျကာတာ၊ ဇူလိုင် ၃ဝ
ဇူလိုင် ၂၉ ရက် နံနက်ခင်း၌ အင်ဒိုနီးရှားတွင် လှုပ်ခတ်ခဲ့သော ပြင်းအား ၆ ဒသမ ၄ မဂ္ဂနီကျု အဆင့်ရှိ ငလျင်ကြောင့် အနည်းဆုံး လူပေါင်း ၁၄ ဦးခန့်သေဆုံးခဲ့ ပြီး ၄ဝ ဦးခန့် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ငလျင်ကြောင့် ခရီးသွားများ အကြား ရေပန်းစားသော အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ လန်ဘော့စ်ကျွန်းရှိ ရင်ဟာ နီတောင် အမျိုးသားဥယျာဉ်၌ ထိုင်းခရီးသွား ၂ဝဝ ခန့် အပါအဝင် ခရီးသွားများ ရာနှင့်ချီ ပိတ်မိလျက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။
ရင်ဟာနီတောင်၌ ပိတ်မိနေ သော ခရီးသွားများအတွက် ဇူလိုင် ၃ဝ ရက်၌ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ စတင်နေပြီဟု အင်ဒိုနီးရှား သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ကူညီကယ်ဆယ်ရေး အေဂျင်စီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကဆိုခဲ့သည်။ ခရီးသွားအများအပြားမှာ လုံခြုံရာသို့ ထွက်ပြေးရောက်ရှိလာခဲ့သော်လည်း ငလျင်၏နောက်ဆက် တွဲ မြေပြိုမှုများကြောင့် လူအများမှာ ဆက်လက် ပိတ်မိနေသည်။
”နောက်ဆုံးသိရသော သတင်းများအရ ရင်ဟာနီတောင်ပေါ်က ခရီးသည်အားလုံးကို ဆမ်ဘလန် တောလမ်းကို အသုံးပြုပြီး ဒီနေ့အပြီး ကယ်ထုတ်နိုင်ခြေ ရှိပါတယ်”ဟု မြောက်လန်ဘော့စ် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ကယ်ဆယ်ရေး အေဂျင်စီမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြော ကြားခဲ့သည်။
ပေကျင်းတွင် လေထုညစ်ညမ်းမှု ကာကွယ်ရန် ကုန်ထုတ်စက်ရုံ ၁ဝဝဝ ခန့်ကို ပိတ်ခိုင်း
အောင်ရဲထွေးအမှု ရုပ်သိမ်းခဲ့ခြင်း၏ နောက်ကွယ်မှ အကြောင်းရင်းကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရန် နိုင်ငံ?
စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီးတွင် နှစ်လကျော်အတွင်း လေပြင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့် အိမ်ခြေ ၁၃ဝဝ ကျော် ?
ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးသွားများ အတွက် စစ်ကိုင်းတိုင်းရှိ ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်များ တည်ရှိရာဒေ??
ပျဉ်းမနားမြို့မှ ပန်းချီဆရာများ ရေးဆွဲခဲ့သည့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆ?
အမျိုးသမီး Thor အဖြစ်သရုပ်ဆောင်မယ့် မင်းသမီးနာတာလီယာပို့တ်မန်း
‘ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ ရိုက်ကူးမှုအပိုင်းက အရမ်းကြီး ကွာခြားနေတာမျိုး မရှိဘူး၊ တစ်ခုပဲ အချိန်ပေးရ